၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလထုတ် အတွဲ (၂)၊ အမှတ် (၁) ထွက်ရှိ
Root Agency > Uncategorized > ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလထုတ် အတွဲ (၂)၊ အမှတ် (၁) ထွက်ရှိ
By Admin | Posted on February 2, 2017 | Also posted in Uncategorized | |
#ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ပထမဦးဆုံး သတင်းမဂ္ဂဇင်း……. “The Root Magazine” ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလထုတ် အတွဲ (၂)၊ အမှတ် (၁) တွင်
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ၏ ပါတီတွင်း နိုင်ငံရေးကြံ့ခိုင်မှုအနေအထားများ အပါအဝင် ပါတီသစ်အဖြစ် တည်ထောင်လာသည့် ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်၏ လားရာလမ်းကြောင်းတို့ကို သုံးသပ်တင်ပြချက်နှင့်အတူ ANP ၏ နိုင်ငံရေးပါဝါတို့ ဘာကြောင့် ကျဆင်းလာခဲ့ရသနည်းတို့ကို ဖတ်ရှုရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းအပြင် နိုင်ငံသားပြုမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွင်း ရှုပ်ထွေးနေသည့် ပြဿနာရပ်များအပေါ် လေ့လာတင်ပြချက်များ၊ ပြည်နယ်၏ သစ်တောထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ မအောင်မြင်မှု ကိစ္စရပ်များ၊ နယ်စပ်တွင် ဖော်ဆောင်မည့် တိုင်းရင်းသား ကျေးရွာသစ်တို့၏ အလားအလာများကို လေ့လာတင်ပြချက်များတွင် ဖတ်ရှုရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်နယ်အတွင်း သက်ငယ်မုဒိန်းမှုများ မြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူ အသိပညာပေးဆောင်ရွက်မှုများ၏ အားနည်းချက်တို့အပေါ် ဆန်းစစ်တင်ပြချက်များ အပါအဝင် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ လူ့အခွင့်အရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး စသော သတင်း၊ သတင်း သုံးသပ်ချက်၊ လေ့လာတင်ပြချက်များတို့ကို
ကောင်းမွန်သည့် စက္ကူ အရည်အသွေး၊ ဆန်းသစ်သည့် အပြင်အဆင်များနှင့် အတူ ရခိုင်ပြည်နယ် စာဖတ်ပရိသတ်များလက်ထဲသို့ စတင်ဖြန့်ချီနေပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
ရန်ကုန်တွင် ရခိုင်အမျိုးသားနေ့ကို အမျိုးသားကဇာတ်ရံ...
နှစ်နှစ်ခွဲဝန်းကျင် ရပ်နားထားခဲ့ရသည့် စစ်တွေ-တောင်...
ရခိုင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဇုန် မေလ မကုန်မီ စတင်မည်...
BURMA: RSF calls for probe into reporter’s dismiss...
The Root Magazine ဒီဇင်ဘာလထုတ် အတွဲ (၁) ၊ အမှတ် (၂...
ALP ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် ခိုင်မျိုးထွန်း၏ အမှုကြန်...
ဘူးသီးတောင်မှ ပုဒ်မ ၁၈/၁၉ ဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသူ...